Nhau - Ndeupi musiyano uripo pakati pekeramiki uye bone china?
1. Kugadziriswa kwemakeramiki
1. Imba yekugezesa inogona kushandiswa pakuchenesa zuva nezuva.
2. Wedzera amoniya shoma nesipo kana shandisa musanganiswa weiyo yakaenzana yelinseed uye turpentine kutanga, iyo inozove nekusimba kwakanyanya uye inogona kuita kuti mataira apenye.
3. Kana ukadurura zvinwiwa zvine simba zvokudhaya zvakaita seti yakasimba kana ingi pazvidhinha, zvipukute ipapo ipapo.
4. Wakisi mataira akapukutwa nguva dzose kuti uwane dziviriro inogara kwenguva refu, uye nguva yacho inguva mwedzi 2-3.
5. Kana paine zvishoma zvakakwenya pazvidhinha, isa mushonga wemazino panzvimbo yakakwenya uye wopukuta nejira nyoro rakaoma kuchenesa makwakwara.
2. Kugadziriswa kwepfupa china:
1. Inofanira kucheneswa nemaoko, kwete kusuka ndiro. Kana iwe usingade kushambidza nemaoko, unofanirwa kusarudza dhishi rekuwachisa riine "porcelain nekristaro" yekuwachisa.
2. Tafura yemidziyo ine micheto yegoridhe haifanire kuiswa muovheni yewa microwave kudzivirira kuora.
3. Iko kushambidza PH kukosha kunofanira kuve pakati pe11-11.5.
4. Paunenge uchigeza nemvura yakachena, iyo tembiricha yemvura haifanire kudarika 80 ℃.
5. Usanyudza mukombe unopisa wakanangana nemvura inotonhorera, kuitira kuti usakanganisa porcelain nekuda kwekukurumidza tembiricha shanduko.
6. Kana paine kukwenya, unogona kushandisa mushonga wemazino kupolisha.
7. Kana paine tsvina yetiyi, inogona kucheneswa nejusi remonimu kana vhiniga.
8. Zviri nani kuti usashandise nekupisa kamwe kamwe, kuti usaputika.
9. Usashandise murazvo wakashama wakananga
1.Mhando dzakasiyana mbishi:
Porcelain inogadzirwa nevhu revhu uye akasiyana emaminerari echisikigo seyakanyanya mbishi zvinhu, uye iyo porcelain ine pfupa yehupfu zvemukati zvinopfuura 25% mune yakasvibirira ipfupa china.
2. Maitiro akasiyana:
Bone china kupfura inotora yechipiri yekupfura maitiro, uye tembiricha iri pakati pe1200 degrees uye 1300 degrees. Kazhinji, zviumbwa zvinogona kuumbwa mushure mekupfura pamadhigirii mazana mapfumbamwe.
3. Zviyero zvakasiyana:
Nekuda kwekuoma kwakanyanya kwepfupa china, iyo porcelain yakanyanya kuonda kupfuura yakajairika porcelain, saka bone bone yeiyo vhoriyamu yakareruka kupfuura porcelain.
4. Kwakasiyana mavambo:
Bone china rakatangira muUnited Kingdom uye yakakosha porcelain yemhuri yehumambo uye vanokudzwa veUnited Kingdom. Ceramics yakatanga kuChina ine nhoroondo yakareba.
1. Maonero akanaka
Musiyano wezvinhu uye hunyanzvi pakati pefupa china uye ceramics inosarudza yavo giredhi giredhi. Mhuka pfupa marasha ndiyo sarudzo huru yekugadzira bone china, uye zvirimo zvakakwirira se40%. Parizvino, yemhando yepamusoro yemapfupa kudya kwemhuri yehumambo yeBritish ine yakakwira kwazvo pfupa yezvakanyorwa mupasi yakakwira se50%
2. Maitiro enhanho
Iyo bone china ruva pamusoro uye iyo glazed pamusoro yakasanganiswa pamwechete, uye haina mutobvu uye cadmium izvo zvinokuvadza kumuviri wemunhu. Inogona kunzi chaiyo "green porcelain". Kushandiswa kwenguva refu kunobatsira kune hutano hwevanhu. Bhonzo china rakadzingwa kaviri, uye maitiro acho akaomarara. Inongogadzirwa muBritain, China, Japan, Germany, Russia neThailand. Bhonzo china rakareruka, rakakora uye rakaomarara (zvakapetwa sezuva nezuva-kushandisa porcelain), hazvisi nyore kupfeka nekutyora, kupisa kupisa pa180 degrees Celsius uye 20 degrees Celsius pasina kutsemuka, uye mwero wekutora mvura uri pasi pe0.003%.
3. Thermal kuputira maturo
Inofananidzwa neyakajairika porcelain, bone china ine nani kupisa chengetedzo uye nani kuravira kana uchinwa kofi kana tii.
Bhonzo china rinogara kwenguva refu kupfuura zvakajairika keramiki. Izvi zvinodaro nekuti kuumbwa kwepfupa china kwakasiyana neyakajairika porcelain. Inogona kuve yakatetepa, yakasimba uye yakawanda inopfeka-isingagadzirike, isiri nyore kupfeka uye kutsemuka. Iko kuomarara kwepfupa china kunofanirawo kuve kanopfuura ka2 kaizvo zveceramics. Bhonzo china haritsemuki panguva iyo kupisa kuchichinjana pakati pe180 ne20 20 mumvura. Nekudaro, zvakanakisa kuti usaite nemaune kugara uchikurumidza kutonhora uye kupisa mukati mekushandisa, nekuda kwekuwedzera kwekushisa uye kudzora, Zvigadzirwa zvePorcelain zvinowanzoputika.
5. Chigadzirwa chechigadzirwa
Inofananidzwa neyakajairika keramiki, bone china ine yepamusoro soro giredhi. Kwenguva yakareba, bone china yanga iri yakakosha porcelain yehumambo hweBritain nemachinda. Parizvino ndiyo chete yepamusoro-yekupedzisira porcelain inozivikanwa pasi. Iyo ine mbiri mbiri ?? yekushandisa uye hunyanzvi. Icho chiratidzo chesimba uye chinzvimbo uye inozivikanwa samambo wevhu.
Uye zvakare, iyo pfupa china haina kusimba uye yakajeka, chimiro chayo chakanakisa uye chakashongedzwa, iyo yepamusoro pevhu yakanyorova sejade, uye pamusoro pemaruva yakatonyanya kuve neruvara. Iko kukura kwefupa china kwave kugamuchirwa uye kushandiswa nevanhu vazhinji uye vazhinji. Ivo havasisiri vevakomana chete vanodya, midziyo yemuto, asi zvakare senge rudzi rwemafashoni uye kunakirwa kwehunyanzvi, sekuratidzwa kwekudyira budiriro, Zvishoma nezvishoma zvakapinda muhupenyu hwedu hwezuva nezuva.